FANDROBANA SY HERISETRA : Saron’ny Polisy ilay rangahy tsy mpandoa ny volan’ireo mpivarotena
Tranga hafahafa nanaitra ny mponina teny amin’ny manodidina an’Andohatapenaka ny fahitana rangahy iray nifanenjehan’ny fokonolona teny an-toerana ny faramparan’ny herinandro lasa teo iny. 31 juillet 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy amin’ny Polisim-pirenena, omaly dia ny sabotsy tokony ho tamin’ny 10 ora maraina no nenjehina olona maromaro teny amin’ny faritra Andohatapenaka izy io. Raha vao nahita izany ny Polisy dia nandray andraikitra avy hatrany mba hiverenan’ny filaminana ka nisambotra ity lehilahy ity.
Nentina teo anivon’ny kaomisarian’ny Boriborintany faha-7 izy nanaovana fanadihadiana. Tamin’io maraina io ihany anefa dia nisy vehivavy mpivarotena miisa efatra no tonga nametraka fitarainana mahakasika io lehilahy io noho izy tsy mety mandoa vola sady mandrahona amin’ny antsy. Etsy andanin’izay mbola miverina any amin’ilay tranon’ireo mpivarotena ka mamaky izany no sady maka izay rehetra azony alaina ao.
Fantatra nandritra ny fakana am-bavany azy hatrany moa fa efa nifonja teny Tsiafahy ity farany noho ny antony fitanana fitaovam-piadiana sy fikambanan-jiolahy mahery vaika eny amin’iny faritra iny. Niaiky ny fiampangana azy ity lehilahy ity ka aorian’ny famotorana dia hatolotra ny fampanoavana ny raharaha.
Zotra amina lalam-pirenena miisa fito no niverina amin’ny laoniny FITATERANA AN-TANETY (231) 16 septembre 2020 Vazaha iray voatifitra, voaroba ny vola tamina kitapo NIREFOTRA NY BASY TANY TOLIARA (191) 16 septembre 2020 Lehilahy tra-tehaky ny Polisy teo am-pandrobana fiara ANTSAHAMANITRA (130) 16 septembre 2020 Iray volana vao hita ilay zazavavy varira 12 taona FAKANA AN-KERINY (122) 18 septembre 2020 Rarahan’ny jiolahy fampatoriana ny sakafon’ireo olona horobaina SAMBAVA (121) 18 septembre 2020 Olona marary saina nianika “pylone” nitondra herinaratra ANOSIZATO (116) 16 septembre 2020